မင်းရဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ထားလဲ - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > ဘယ်လိုသင့်ရဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားသလဲ?
ကလေးတစ် ဦး က "ဘီစကွတ်" ကိုလိုချင်ပေမယ့် cookie jar ကိုပြန်လှည့်လိုက်သည်။ ဘီစကစ်မုန့်မတောင်းဘဲနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုမှတ်မိသည်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်မတိုင်မီငါးမိနစ်တွင်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးသူသို့မဟုတ်သူမအိမ်နောက်ကျရန်အတွက်မရင်ဆိုင်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့်သူတို့၏ဝင်ငွေကိုအပြည့်အ ၀ ကြေညာရန်သေချာစေပြီးအခွန်ငွေကိုစစ်ဆေးသောအခါဒဏ်ငွေကိုမပေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်များစွာသောသူတို့ကိုအမှားပြုခြင်းမှတားဆီးပါသည်။
အချို့ကစိတ်ပူစရာမလိုသော်လည်းသူတို့၏လုပ်ရပ်သည်မသက်ဆိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်သူတို့ဖမ်းမိမည်မဟုတ်ဟုယူမှတ်သည်။ လူတွေကသူတို့လုပ်တာကဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးကြားခဲ့ပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်ရသနည်း။
တချို့ကျတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်မှသာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကသူတို့၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခြားသူများကမူသူတို့ပြုသောအမှု၏အကျိုးဆက်များကိုမစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ပုံရသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုရသနည်း။ သမာဓိရှိခြင်းသည်အဘယ်မှလာသနည်း။
ရောမဘာသာ 2,14-17 spricht Paulus von Juden und Nichtjuden und ihre jeweilige Beziehung zum Gesetz. Die Juden liessen sich vom Gesetz Moses leiten, aber einige Nichtjuden, die das Gesetz nicht hatten, taten von Natur aus das, was das Gesetz verlangte. «In ihrem Tun waren sie sich selbst ein Gesetz».
မိမိတို့၏ အသိစိတ်အတိုင်း ပြုမူကြသည်။ The Expositor's Bible Commentary တွင် Frank E. Gaebelein က ယုံကြည်ချက်အား “ဘုရားသခင်ပေးသော မော်နီတာ” ဟုခေါ်သည် ။ အမှားအမှန်ကို သိခြင်း။
ကျွန်ုပ်သည်ကလေးတစ် ဦး အဖြစ်မလျော်ကန်စွာပြုမူခဲ့ပါကကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုခံစားမိစေရန်သေချာစေခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာငါ့ရဲ့သိစိတ်ကိုပိုခိုင်မာစေတယ်။ ယနေ့ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိသောအခါသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအပြုအမူတစ်ခုခုကိုတွေးမိသောအခါသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအတွေးတစ်ခုရှိသည့်အခါငါနောင်တရပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နားထောင်ရန်ကြိုးစားသည်။
ယနေ့အချို့သောမိဘများသည်အပြစ်ကို“ ဆရာ” အဖြစ်မယူကြပုံရသည်။ «နိုင်ငံရေးအရမမှန်ပါဘူး အပြစ်ရှိတယ်၊ မကျန်းမာဘူး ၎င်းသည်ကလေး၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ အမှားမျိုးသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောဆုံးမပဲ့ပြင်မှု၊ အမှားအမှန်အယူဝါဒနှင့်ကောင်းမွန်သောနောင်တသည်ကလေးများအားသမာဓိရှိသူလူကြီးများဖြစ်လာရန်လိုအပ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွင်အမှားအယွင်းများရှိပြီးတိုင်းပြည်၏ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက်အပြစ်ပေးခြင်းခံရသည်။ များစွာသောသူတို့၏သမာဓိနှင့်သိစိတ်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းသည်ဝမ်းနည်းစရာပင်။
သမာဓိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသူတစ် ဦး တည်းမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ သမာဓိသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြပေးသည်နှင့်အမျှသိစိတ်ကြည်လင်သည့်သိစိတ်အတွက်လမ်းညွှန်မှုတိုးများလာသည်။ အမှားနှင့်အမှန်ကွာခြားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏သားသမီးများကိုသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ပေးသည့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်ကိုပြရမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နားထောင်ရန်သင်ယူရန်ရှိသည်။ ရိုးသားတဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆင်ပြေအောင်ဘုရားသခင်ကဒီ built-in မော်နီတာကိုပေးထားတယ်။
သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုမည်သို့လေ့ကျင့်ပေးသနည်း - အသုံးပြုမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကောင်းမွန်သောအချက်သို့ပြတ်တောက်သွားသလား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်အမှားအမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိနားလည်လာစေရန်ဆုတောင်းကြပါစို့။